डा. उपेन्द्र देवकोटाले डा. बाबुरामलाई किन भोट नदिन गरे आग्रह ? (कारण यस्ता छन्) – Pahilo Page
डा. उपेन्द्र देवकोटाले डा. बाबुरामलाई किन भोट नदिन गरे आग्रह ? (कारण यस्ता छन्)
गोरखा । गोरखामा जन्मेका डा. उपेन्द्र देवकोटाले बाबुरामसँगै एसएलसी पास गरेर डाक्टरी पढे । उनी कहलिएका डाक्टर समेत हुन् । पालुङटारमा आयोजित सभामा बोल्दै डा. देवकोटाले गोरखाका कुनै अरु डाक्टरले जसरी आफूहरुले पीएचडीको सर्टिफिकेट बिक्री नगरेको बताएका छन् ।
“गोरखामा धेरै डाक्टरहरु जन्मनु भएको छ । पोष्ट ग्राजुयट गरेका विद्यार्थीहरुलाई मैले पढाउँछु । मेरो भाइ पीएचडीपछिको कोर्ष अध्ययन गरेर देशमा बसेर काम गरिरहेको छ । हामीले प्रचार गरेका छैनौं । मैले धेरैको मष्तिस्क चिरफार गरेँ । मानिसहरु देखेपछि उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ । अब देशमा बाम गठबन्धनको विकल्प नभएकोले म यही बाटोमा अगाडि लागेको छु ।”
राजनीतिशास्त्रमा नेताहरुलाई चार सिद्धान्तले स्थापित गरेको उनले बताए । “पहिलो सिद्धान्तको आधारशीला हो । दोश्रो नैतिकताको सिद्धान्त, तेश्रो मार्गचित्र र चौंथो सबैसँग समझदारी जुटाउन सक्ने हुनुपर्दछ । तर बाबुराममा कुनै पनि गुण नभएकोले आम गोरखाबासी झुक्किएर पनि बाबुरामलाई भोट नदिन यो डाक्टर आग्रह गर्दछ”, उनले भने । डा. उपेन्द्रले थपे, “म विरामी जाँचेर गोजीमा पैसा हाल्ने बेला किन यो बाम गठबन्धनको निर्वाचन प्रचारमा हिँडेको छु ? जसरी विरामीहरुलाई मैले उपचार गरेर ठिक पार्छु, त्यसरी नै नेपालको राजनीतिलाई पनि ठिक पार्न लागि परेको हुँु ।”
२०२२ सालदेखि विद्यार्थी संगठन सुरु गर्ने गोरखाको पहिलो विद्यार्थी भएको नाताले बाम गठबन्धनलाई सहयोग गर्न आफू गोरखा पुगेको धारणा पनि उनले राखे । हिजो चिलाउने र कटुसका रुखमुनि बसेर विद्यार्थी संगठन बनाएर लागिपरेको डा. देवकोटाले बताए । गोरखामा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचाई दिन प्रचण्ड, बाचस्पति देवकोटा, सुरेश वाग्ले, जगत श्रेष्ठ, परशुराम श्रेष्ठ, ओजराज भट्टराई लगायतका नेताहरुको उच्च योगदान रहेको उनले स्मरण गरे ।
बाम गठबन्धनदेखि आत्तिएर शेरबहादुर देउवाले घसेटा र चेस्का बटुलेर अर्को गठबन्धन बनाएको देवकोटाको भनाई छ । डा. बाबुराम भट्टराईतर्फ इंगित गर्दै डा. देवकोटाले थपे, “त्यही गठबन्धनको घटक पालुङटारमा आएको छ । त्यसलाई भोट दिनुको अर्थ छैन ।” उनले भविष्य नभएकाहरुको बाटोमा नलाग्न आग्रह पनि गरे ।
बूढी भैंसीलाई कुँडो खुवाएर दूध नआउने बताउँदै डा. बाबुरामको राजनीति सकिएको उनकै सहपाठी डा. देवकोटाले बताए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रदेशसभा १ की उम्मेदवार कमला नहर्की लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति : बुधवार, कार्तिक २९, २०७४ समय : २२:०२:१५ 718 पटक पढिएको